A sample nke a typical ụtụtụ ná ndụ m — HunterThinks.com
A sample nke a typical ụtụtụ ná ndụ m
23 April 2018 22 Ka 2014
N'okpuru ebe a bụ obere nkọwa nke m ụtụtụ otú anya. Ụbọchị nke ọ bụla dị iche iche ma ọ bụla ụbọchị nwere nkịtị gburugburu na taa na-egosi ụfọdụ n'ime ihe nkịtị nsogbu: ngwa ngwa na mberede oscillation n'etiti ọnọdụ uche; na-ejighị n'aka Jeremaya mere; mgbaàmà, karịsịa site PTSD, ime nkịtị aga-eme; anụ ahụ mgbaàmà; na na ụfọdụ ihe ndị na-akpalite m mgbaàmà ndị absurdly obere na-enweghị ihe ọjọọ.
M teta na banyere 7 m. M disoriented a ụtụtụ n'ihi na n'abalị ikpeazụ m na-ama ụma na-ada n'ụra. O yiri ka ụfọdụ ebe n'abalị ikpeazụ, m dara n'ụra, eleghị anya mgbe m na-arụ ọrụ n'abalị ikpeazụ m nsogbu ka m na-etinye m na isi m ala na blanket. Nke a ụtụtụ na, M na-edo na ihe iberibe ọnọdụ, kọmputa m bụ na-emeghe ma na-akpọ music, na window e mechiri: niile nke ndị ọhụrụ.
M tetara n'ihi na m na-enwe a nro, ma, ọ bụ dịtụ nwayọọ. N'agbanyeghị nro, na iberibe ehi ụra ndokwa, mbụ m mgbagwoju anya, M nwere a full 7.5 ụra awa, nke bụ ahụkarị, na m chere nweta ume ma na a ọma na ọnọdụ mgbe m chọpụta ihe mere.
M emezu ọtụtụ obere ihe aga-eme na m website, na m ọbụna dechara a isi oru ngo m malitere ụnyaahụ. (“dechara” bụ ikwu: ọ bụ mezue ezuru ugbu a.)
Ozugbo m dechara niile n'ime ndị doro anya ihe aga-eme, M nwere ike ikpebi ihe na-arụ ọrụ na-esote. -Adị m ka ọ bụrụ na m ò obi bụ nnọọ ngwa ngwa na-adị m mgbagwoju anya na ihe ndị na-ejikarị gaghị emegharị m. Nke a mgbaàmà na-abịa ma na-aga, na m na nso nso mụtara na ọ bụ ejikọrọ na m PTSD. N'ihi na a tụnyere, mgbe m edemede ụbọchị abụọ gara aga, M bụ nkọ na lekwasịrị anya na m bụ ike ịrụ a dịtụ mgbagwoju analysis iji ngwá ọrụ na m na-na na-adịghị eji tupu. Nke a ụtụtụ na, Otú ọ dị, Apụghị m na-echeta atụmatụ m mere n'abalị ikpeazụ m na-apụghị chepụta ihe m nzọụkwụ ọzọ ga-abụ. M na-eche na m ò obi na-arụ ọrụ na ọkara ikike.
A obere oge gara aga, M chọpụtara a nwụrụ anwụ ahụhụ n'ala. Enwere m naanị otu phobia, na-adakarị uche, na a ahụhụ bụ m phobia. Ọ nwụrụ. Ọ bụ obere. Ọ bụ na m n'ala na m nwere ike na-adị mfe pụọ ya. Mgbe m bụ ike, M ga-enwe a ike na-adịghị mma mmeghachi omume ya, ma m ga-enwe ike jikwaa ya. Nke a ụtụtụ na, M malie ma gara n'ọnụ ụzọ na dorm ụlọ. M kpọnwụrụ site ekpebi. Ka m kwesịrị ịjụ mkpara ọcha ya? Ọ bụrụ otú ahụ, m ga-n'ime ụlọ ma ọ bụ na? Ka m kwesịrị ịjụ ha ịgbanwe Ibé akwụkwọ na-eme ndị ọzọ ilekọta ihe aga-eme nke mere na ọ ga-abụ ịrụ ọrụ nke ọma? Ga m na-agbalị ọcha ya onwe m? Mgbe ọ bụla m mere mkpebi m ga-a anụ ahụ nzọụkwụ kwupụta ụzọ ma ọ bụ kwupụta ahụhụ na mgbe ahụ, m ga-jupụta na obi abụọ ọzọ na-akwụsị na reanalyze ihe niile. Mgbe a nkeji ole na ole nke usoro a, M jisiri iji ụfọdụ ochie akwụkwọ ọcha ya na-etinye ya na ahịhịa.
M malitere na-arụ ọrụ ọzọ, na m nọ na-agbalị chepụta ihe ọrụ m chọrọ ime ọzọ. M mere ụfọdụ nnyocha na mere a ole na ole obere ihe. E nwere ijiji m n'ime ụlọ m na ha na-ọdịda na m na ọ ukwuu annoys m. My incapability ikpebi ihe na-eme, jikọtara na ndị ọzọ stressors, nnukwu na obere (i.e., ijiji, nwụrụ anwụ ahụhụ), nyere m a jọgburu onwe afọ mgbu.
Ọ bụ mgbe m kpebiri na m dee ihe a post, na o were m banyere 15 nkeji dee. na-akpali mmasị, mgbe ede ya, ụfọdụ m mgbaàmà mma. My afọ mgbu bụ gawara, na nchegbu m mmetụta na-otú ahụ ala. My ò obi ka na-hobbled, ezie.
Ọ bụla hour nke ụbọchị ọ bụla, M ga-agha site na ihe na mgbaàmà ndị dị otú ahụ dị ka n'elu. Ọ dịghị ọrụ, n'agbanyeghị otú na-adịchaghị mkpa, na-ekwe nkwa ka mfe ma ọ bụ mfe. Ọ bụrụ na m na-aghaghị ịnagide m gbajiri obi Jeremaya mere na m intermittently-hobbled ò uche, mgbe ahụ, m nwere ike N'ezie ebili m ịda ogbenye na nsogbu ndị ọzọ. Ma mmetụta uche m na-nchịkwa na m ò uche mgbe ụfọdụ jụ arụkọ, otú ahụ ka m na araparawo a nọgideworo nke ịda ogbenye na echiche ọrịa.
Categories Ndụ m Tags nchegbu, Nightmares, Poverty, PTSD post igodo
Anwale ọhụrụ atụmatụ